Kudzinga | Law & More B.V.
Blog » Kudzinga
Kudzingwa ndeimwe yematanho anosvika kure mumutemo webasa une mhedzisiro inosvika kune mushandi. Ndokusaka iwe semushandirwi, kusiyana nemushandi, usingakwanise kungodaidza kuti zvasiya. Iwe une chinangwa chekudzinga mushandi wako here? Muchiitiko ichocho, iwe unofanirwa kurangarira mune mamwe mamiriro ekudzingwa kunoshanda. Chekutanga pane zvese, zvakakosha kuti uone kana mushandi wauri kuda kudzinga ari mune yakasarudzika mamiriro. Vashandi vakadaro vanonakidzwa kudzingwa basa. Unogona kuverenga nezve mhedzisiro kwauri semushandirwi pane yedu saiti: Kushairal.site.
Iwe unofanirwa zvakare kumisikidza kudzingwa kwemushandi wako pane chimwe chezvikonzero zvinotevera:
kudzingwa kwehupfumi kana rimwe kana mamwe mabasa angangorasika;
kutadza kwenguva refu kwebasa kana mushandi wako anga achirwara kana kushaya basa nekuenderera kwemakore maviri kana kupfuura;
kutadza kushanda paunogona kuratidza nekukurudzira kuti mushandi wako haana kukodzera kuita mabasa ake;
zviito zvine mhosva kana kusiiwa kana wako mushandi achizvibata (zvakakomba) zvisina basa kubasa;
kukanganisa hukama hwebasa kana kudzoreredzwa kwehukama hwevashandi kusisaite uye kudzingwa hakudzivisike;
kazhinji kusaenda kubasa kana mushandi wako achirega kuuya kubasa, achirwara kana nehurema, uye izvi zvine mhedzisiro isingagamuchirike pabasa rako;
kudzingwa basa nekuda kwezvikonzero zvakasara kana mamiriro acho akaita zvekuti hazvina musoro kuti iwe semushandirwi ubvumire chibvumirano nemushandi wako kuenderera;
kuramba kuita zvehana nekuda kwehana pawakagara wakakomberedza tafura nemushandi wako uye wasvika pamhedziso yekuti basa harigone kuitwa muchimiro chakashandurwa uye kupihwa patsva haisi nyaya.
Kubva 1 Ndira 2020, mutemo une chimwezve chikonzero chekudzingwa, kureva iyo pasi rinowedzera. Izvi zvinoreva kuti iwe semushandirwi unokwanisa zvakare kudzinga mushandi wako kana mamiriro kubva pazvikonzero zvakati kuti zvekudzingwa achikupa chikonzero chakaringana chekudaro. Nekudaro, semushandirwi, haufanire kungoisa sarudzo yako yekudzingwa pane chimwe chezvikonzero zvataurwa zviri pamutemo, asi zvakare kuratidza nekusimbisa kuvapo kwayo. Sarudzo yechimwe chikonzero chekudzinga inosanganisirawo nzira chaiyo yekudzinga.
Unosarudza kudzingwa basa nekuda kwezvikonzero zvebhizimusi kana kusagona basa (yakareba kupfuura makore maviri)? Pakadaro, iwe semushandirwi unofanirwa kunyorera tsamba yekudzingwa kubva kuUWV. Kuti uve unofanirwa nemvumo yakadai, unofanirwa kukurudzira chikonzero chekudzingwa kwemushandi wako. Mushandi wako anozove nemukana wekuzvidzivirira pane izvi. UWV inozofunga kana mushandi anogona kudzingwa kana kwete. Kana iyo UWV ichipa mvumo yekudzingwa uye mushandi wako asingabvumirani, mushandi wako anogona kuendesa chikumbiro kudare repasi redunhu. Kana wekupedzisira akaona kuti mushandi ari kurudyi, iyo Subdistrict Dare inogona kusarudza kudzosera chibvumirano chebasa kana kupa mubhadharo wemushandi wako.
Uri kuenda kudzinga nekuda kwezvikonzero zvako? Ipapo nzira yedare repasi pekutenderera inofanirwa kuteverwa. Uyu hausi mugwagwa uri nyore. Semushandirwi, iwe unofanirwa kunge wakavaka yakawandisa faira pahwaro hwaanogona kuratidzwa kuti kudzingwa ndiyo yega sarudzo. Ipapo ndipo chete apo dare rinokupa mvumo yechikumbiro chekumisa chibvumirano chebasa nemushandi wako. Uri kutumira chikumbiro chekukanzura zvakadaro? Ipapo mushandi wako akasununguka kuzvidzivirira pane izvi uye kutaura chikonzero nei asingabvumirane nekudzingwa kwacho kana kuti nei mushandi wako achitenda kuti anofanirwa kuwana mubhadharo wekurega basa Chete kana zvese zvinodiwa nemutemo zvasangana, iyo Subdistrict Dare ichaenderera nekuputsa chibvumirano chebasa.
Nekudaro, kuburikidza ne kudzingwa nekubvumirana, unogona kudzivirira kuenda kuUWV pamwe nezviri kuitika pamberi penzvimbo yedunhu redzimhosva uye nokudaro chengetedza mari. Pakadaro, iwe unofanirwa kusvika pazvibvumirano zvakakodzera nemushandi wako kuburikidza nekutaurirana. Paunenge waita zvibvumirano zvakajeka nemushandi wako, zvibvumirano zvakakodzera zvinozonyorwa muchibvumirano chekugadzirisa. Izvi zvinogona, semuenzaniso, zvine mutemo wekuti ndeupi mubhadharo wekubhadhara mushandi wako achagamuchira uye kuti chingave chikamu chemakwikwi chinoshanda. Izvo zvakakosha kuti zvibvumirano izvi zvakanyoreswa zviri pamutemo pabepa. Ndosaka kuri kuchenjera kuti zvibvumirano zviitwe zviongororwe negweta nyanzvi. Sezvineiwo, mushandi wako ane mazuva gumi nemana mushure mekusaina kuti adzokere kuzvibvumirano zvakaitwa.
Pfungwa dzekutariswa kana uchinge wadzingwa
Wati wafunga kudzinga mushandi wako here? Zvino zvakare zvine hungwaru zvakare kuteerera kune anotevera mapoinzi:
Shanduko Mari. Fomu iri rine chekuita nemari yepasi inobhadharwa inofanirwa kutemerwa zvichienderana nefomula yakatarwa yaunokweretesa mushandi wako wekusingaperi kana anochinja kana iwe uchienderera nekudzingwa. Nekuunzwa kweWAB, iko kuwedzerwa kweiyi shanduko kubhadhara kunoitika kubva pazuva rekutanga rekushanda remushandi wako uye kune-vekufona vashandi kana vashandi munguva yekuyedza vanopihwawo mubhadharo wekuchinja. Nekudaro, kune rimwe divi, iyo yakawedzera mari yekushandurwa kwemubhadharo wevashandi vako vane kontrakiti yebasa yakareba kupfuura makore gumi ichadzimwa. Mune mamwe mazwi, zvinova “zvakachipa” kwauri semushandirwi, mune mamwe mazwi zviri nyore kudzinga mushandi ane kondirakiti yenguva refu yebasa.
Kubhadhara kwakaringana. Pamusoro pekubhadhara muripo, semushandi, iwe unogona zvakare kuve nechikwereti chakawedzerwa chekubvisa kumushandi wako. Izvi zvinonyanya kuve zvakadaro kana paine chakakomba chiitiko chakashata parutivi rwako. Muchirevo chechiitiko ichi, semuenzaniso, kudzingwa kwemushandi pasina chikonzero chakakodzera chekudzingwa, kuvapo kwekutyisidzira kana kusarura. Kunyangwe kuripwa kwakaringana kusiri iko kwekusiyiwa, zvinongotarisana nematare akasarudzika umo dare richapa muripo wakanaka uyu kumushandi. Kana dare rikapa mushandi wako muripo wakaringana, rinoonawo huwandu hwacho maererano nemamiriro ezvinhu.
Bhiri rekupedzisira. Pakupera kwebasa rake, mushandi wako anekodzero yekubhadharwa mazuva ezororo awedzerwa. Mazuva mangani emazororo ane kodzero yemushandi wako, zvinoenderana nezvakabvumiranwa muchibvumirano chebasa uye pamwe neCLA. Iwo mazororo epamutemo anoshandirwa nemushandi wako mune chero kesi ane kodzero akapetwa kana huwandu hwemazuva ekushanda pasvondo. Pazasi pemutsara, iwe unongofanira kubhadhara mushandi mazuva akaunganidzwa ezororo, asi asati atorwa. Kana mushandi wako aine kodzero yemwedzi wegumi nematatu kana bhonasi, mapoinzi aya anofanira kutaurwawo mune chirevo chekupedzisira uye achibhadharwa newe.
Iwe uri mushandirwi uyo ane chinangwa chekudzinga wako mushandi here? Wobva wabata Law & More. At Law & More isu tinonzwisisa kuti nzira dzekudzinga hadzisi dzakaomarara chete asi dzinogona zvakare kuva nemhedzisiro yakaoma kwauri semushandirwi. Ndosaka tichitora nzira yako pachedu uye pamwe chete tinogona kuongorora mamiriro ako uye mukana. Pamusoro peiyi ongororo, tinogona kukuraira iwe pane anotevera anotevera matanho. Isuwo tiri kufara kukupa iwe zano uye rubatsiro panguva yekudzingwa basa. Iwe une mibvunzo nezve masevhisi edu kana nezve kudzingwa? Iwe unogona zvakare kuwana rumwe ruzivo nezve kudzingwa uye masevhisi edu pane yedu saiti: Kushairal.site.
Previous Post Kukuvadza kunoti: chii chaunoda kuziva?
Next Post Chii chinonzi mhosva?
DEBT Kuunganidza Mutemo
KUENDA KWENYIKA- & KUTAMIRA MUTEMO
Fomu ratumirwa. Ndatenda.